LFI 2022 : lany tsy nasiam-panitsiana teo amin’ny fivoriam-be – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/LFI 2022 : lany tsy nasiam-panitsiana teo amin’ny fivoriam-be
LFI 2022 : lany tsy nasiam-panitsiana teo amin’ny fivoriam-be
Henintsoa il y a 1 semaine
Solombavambahoaka miisa 84 no nandany lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2022 ny talata faha 23 novambra teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza. Lany tsy nasiam-panovana ary tsy nasiam-panitsiana izany, taorian’ny fandinihana natao nandritra ny fivoriambe.
Ny tatitra natao nandritra ny asam-baomiera dia nanisy fanitsiana miisa roa. Ny voalohany dia mahakasika ny fampidinana ny haba-tseranana ho an’ny « bondillons » ho 10% raha 20% no voalaza anatin’ny volavolan-dalàna. Ny faharoa dia momba ny ny fanafoanana ny “garantie à l’importation des PPN” izay omena ny mpandraharaha sasantsasany. Notsipahan’ny Solombavambahoaka anefa ireo nandritra ny fivoriambe.
Ankoatra ireo fanitsiana ireo dia maro ny fanamarihana avy amin’ny Solombavambahoaka mikasika izao volavolan-dalàna izao fa anisan’ny niverimberina matetika ny tsy tokony hampiakarana ny haba-tseranana momba ny “pâtes alimentaires”. Teo ihany koa ny hanomezana lanja bebe kokoa ny fanaovana fotodrafitrasa sy fampiasam-bola amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana.
Nanambara ny Ministry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola fa reny ny fangatahan’ny Solombavambahoaka ary nanamarika izy fa efa nampiakarina ny teti-bola ho an’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana.
Marihina fa tsy nandray anjara tamin’ny fifidianana ny vondrona parlemantera TIM.
Fanamarihana vitsivitsy mahakasika ny Lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ho an’ny taona 2022 :
– Tombanana ho 5,4% ny fitombon’ny harinkarena faobe amin’ny taona 2022 ;
– Raha oharina amin’ny “euro” sy dolara dia vinavinaina ho 3% ny fihiban’ny sandan’ny vola Malagasy;
– Raha ampitahaina tamin’ny LFI 2021 dia niakatra 1.1% ny tahan’ny tsindriketra na “taux de pression fiscale” ho amin’ny taona 2022 ka lasa 11.7% izany raha toa ka 10.6% tamin’ny LFI 2021;
– Vinavinaina 4219 miliara Ariary ny fivoaran’ny hetra anatiny manokana ny taona 2022 raha 3301 miliara ariary izany ny taona 2021. Sarotra ny fanarenana ny toekarena noho ny fisian’ny covid19, tsy teto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao dia misy fiantraikany ratsy teo amin’ny toekarena iny valanaretina iny;
– Eo amin’ny 3063,02 lavitrisa ariary no haba vinavinaina hampidirina amin’ny alalan’ny Faditseranana amin’ny taona 2022;
– Hisy fiakarana 19% ny fampidiram-bola raha oharina amin’ny taona 2021;
– Vinavinaina hanatombo 82.89 miliara ariary no azo vokatry ny fanovana ny “politique tarifaire“ amin’ny fidiran-ketra;
– Ny amin’ny fitsinjarana isan-tsehatra kosa dia ny sehatra sosialy no manana taha ambony indrindra (33,0%);
– Notazomina ho 380 miliara ariary ny vola omena ny JIRAMA, ka ao anatin’izany ny fandoavana ny jiro sy rano ataon’ny Fanjakana, ny fanomezambola ho fampandehanan-draharaha.
Foloalindahy : notoloran’ny Praiminisitra fotodrafitrasa fizarana amin’ny fitifirana
Attentat contre Andry Rajoelina : 11 personnes arrêtées en une semaine
La 109e Conférence Internationale du Travail en visioconférence
MJS: kianja manara-penitra 5 no efa anadalam-panamboarana
Fanalefahan-tsazy nomen’ny Filoha RAJOELINA tany Atsimo : fepetra ho amin’ny fitoniana, hoy ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana Malagasy (CFM)
Liberté de la presse: “préserver la démocratie et sauver des vies”
Sénat: les ressources des collectivités territoriales décentralisées au programme
La grâce présidentielle pour 10.849 détenus